January | 2018 | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
January 30, 2018 drkokogyi
ndian-American social activist, author and grandson of Indian independence icon Mahatma Gandhi, Arun Gandhi in Paris on Jan 29, 2018.PHOTO: AFP
FB (Face Book) Administrators, FB Authorities and their BOSS should not hide behind their LAME EXCUSE of their FB Community Standards to punish the Human Right Activists
January 30, 2018 January 30, 2018 drkokogyi
FB (Face Book) Administrators, FB Authorities and their BOSS should not hide behind their LAME EXCUSE of their FB Community Standards to punish the Human Right Activists to please their Big Customers: Dictators, Military Chiefs & Authoritarians e.g Myanmar, China, Russia etc.
I hope and pray that they may be forced to testify at the INTERNATIONAL COMMUNITY STAND @ ICC.
We miss you dearly, U Ko Ni
“ဦးမောင် လောလောဆယ်မပြန်နဲ့ဦး ပြည်ထဲရေးကို အစိုးရက မကိုင်နိုင်သေးဘူး….”တဲ့
Invading of Burma by Migrants from China
January 29, 2018 drkokogyi
Credit Kyaw Soe Aung
January 28, 2018 drkokogyi
လာမည့် ၂၉ရက်နေ့ဆိုလျှင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ဥပဒေအကြံပေးအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးကိုနီ လုပ်ကြံခံရသည်မှာတစ်နှစ်တင်းတင်းပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ် သည်။ ထိုအတောအတွင်းတွင် ဦးကိုနီအမှုနှင့်ပတ်သက်သမျှ သတင်းများကို ပြည်သူလူထုကစိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြ သလိုမီဒီယာများကလည်းမျက်ခြေပြတ်မခံဘဲ ရုံးချိန်းသတင်းများကို တာဝန်ကြေကြေဖော်ပြခဲ့ကြသည်။
Interview with Bill Richardson on his resignation from Rohingya Panel
Burma (Myanmar) was under India during the British rule
Credit Kelvin Hassan